Ithemba amaBhokobhoko ehlula iNew Zealand
UBONGI Mbonambi umdlali wamaBhokobhoko ngesikhathi edlala neNew Zealand emdlalweni wokugcina weRugby Championship ngoMgqibelo Isithombe: EPA
ULINDELE ukuthi bawuvale ngenothi eliphezulu unyaka ukaputeni wamaBhokobhoko uSiya Kolisi, ngemva kokusonga iRugby Championship ngoMgqibelo, ngokunqoba iNew Zealand ngo 31-29.
Bese kumuncu kumaBhokobhoko ngemuva kokwehlulwa emidlalweni emithathu ilandelana kodwa akwazile ukubuyisa isithunzi ngesikhathi u-Elton Jantjies ekhahlela iphenathi yokuwina sekuvalwe amehlo.
Kube wukuziphindiselela okuhle ngoba ama-All Black abahlwitha umdlalo ngendlela efanayo ngempelasonto edlule, ngephenathi kaJordie Barrett eyangena umdlalo usuyophela.
Ama-All Black abehamba phambili ngamaphuzu amane ngesikhathi kuyiwa ekhefini kodwa uKolisi uthe bebenethemba lokuthi bazokwazi ukubuya ngesiwombe sesibili.
Noma idliwe iNew Zealand kodwa ibisivele yazi ukuthi ingompetha beRugby Championship abasha ngoba iqede esicongweni ngamaphuzu angu-25, ilandelwa yi-Australia ngamaphuzu ayi-18. AmaBhokobhoko aqede endaweni yesithathu ngamaphuzu angu-15 kanti i-Argentina yehlulekile ukuthola ngisho iphuzu elilodwa.
Lo mphumela usho nokuthi amaBhokobhoko azodlula ama-All Black abuyela phezulu uma sekukleliswa amazwe omhlaba kwezombhoxo.
Ngaphandle kwalokho, uKolisi ukholelwa ekutheni kuzokhuphuka ukuzethemba eqenjini lakhe ngaphambi kohambo oluzayo lwase-Europe.
"Kusho lukhulu kithina. Bekunzima ngoba besisebenza kanzima kodwa singayitholi imiphumela emihle. Bengishilo ukuthi sidinga umphumela omuhle," kusho uKolisi.
"Besazi ukuthi imidlalo siyilungiselela kahle futhi siyazinikela kodwa kuba nzima ukuchaza lokho uma abalandeli bengakuboni enkundleni. Lo mdlalo siwunqobele bonke abasesekayo ekhaya eNingizimu Afrika nalaba abebelokhu beza ukuzosibuka la e-Australia.
"Ukuqeda umncintiswano kanjena kusho ukuthi uma sesigoduka isimo sizobe singcono kule ndiza esizobe sihamba ngayo. Nemindeni yethu sizoyifica izizwa kangcono. Lo mphumela uzosinika ukuzethemba ngoba sesibheke imidlalo esizozovala ngayo unyaka esizoyidlala e-Europe."
Kuhlelwe ukuthi amaBhokobhoko abhekane neWales ngoNovemba 6, kube yiScotland ngoNovemba 13, kuze i-England ngoNovemba 20.